Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 nooca GT-I9300 | Androidsis
Xaqiiqdi ku filan dad badana waxay u maleynayaan in adduunka Roms uu horeyba ugu jiray mugdi, tani runti maahan kiiska tan iyo hadda in ka badan sidii hore markii la yimid Android Nougat ama Android 7, mahadnaqa Roms sida mashruuca OS nasashada ama waxa noqonaya sii socoshada Cyanogenmod, maanta ayaan ku barayaa cusbooneysii Samsung Galaxy S3 si buuxda u shaqeynaya Android 7.1 Nougat.
Casharradan gacanta-ku jira ee ay Waxaan ku tusayaa talaabo talaabo ah sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 ama Android Nougat, Waxaa kaliya loogu talagalay qaabka caalamiga ah ama si fiican loogu yaqaan GT-I9300, halkan waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u cusbooneysiiso tan weli baahsan ee Samsung, inkasta oo ay Samsung tahay, haddana waxay ku dhaqaaqi kartaa fudayd ku filan kan ugu cusub uguna dambeeyay nooca Android.
1 Shuruudaha lagu cusbooneysiinayo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 nooca Nougat GT-I9300
2 Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 Nougat (nooca GT-I9300).
3 Samsung Galaxy S3 habka cusbooneysiinta ee loogu talagalay Android 7.1 Nougat
Shuruudaha lagu cusbooneysiinayo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 nooca Nougat GT-I9300
Xaqiiqdii waxaad horeyba u laheyd terminaalkaaga xidid iyo Soo kabasho wax laga beddelay, haddii ay dhacdo si toos ah ugu bood tallaabada 3:
Hayso qaabka caalamiga ah ee Samsung Galaxy S3 GT-I9300
Hayso boosteejada Xidid iyo leh Soo kabasho la beddelay sidaan kuugu muujinayo qoraalkan.
Samee nuqul nandroid nidaamka oo dhan adoo adeegsanaya TWRP Recovery oo ku keydso meel aamin ah sdcard ka baxsan Galaxy S3.
Ku cusbooneysii soo celinta TWRP qaabkeedii ugu dambeeyay ee laga heli karo rasmiga ah app TWRP ama leh Faafi. Linkigan waxaan ka tusayaa sida loo soo dejiyo sawirka ugu dambeeyay ee laga heli karo TWRP Recovery iyo hoosta waxaad ka heli doontaa xiriiriyeyaal si aad u soo dejiso barnaamijyada.
Nuqul nuqul ah ka samayso faylka 'EFS' ee 'Recovery TWRP laftiisa' laga bilaabo ikhtiyaarka Kaydinta, adoo hubinaya kaliya ikhtiyaarka EFS.
(Ikhtiyaari), ku samee kayd dhammaan barnaamijyadaada iyo xogtaada adoo adeegsanaya Titanium Backup maadaama howsha cusbooneysiinta wax walba la tirtirayo.
U oggolow ikhtiyaarka ka-saarista USB-ka ee Settings-ka oo batteriga si buuxda u shaqeeya.
Rasmiga TWRP App
Developer: Kooxda guuleysta LLC
Faylasha loo baahan yahay si loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 Nougat (Qaabka GT-I9300).
Waxaad u baahan doontaa kala soo bax laba feylood oo isku tiftiran qaab zip oo nuqul iyaga oo aan hoos u dhigin gudaha ama xusuusta gudaha ee Samsung Galaxy S3:
Soodejiso Samsung USB Darawal
Soo dejiso Gapps Android 7.1 Nougat ARM 32 jajab
Samsung Galaxy S3 habka cusbooneysiinta ee loogu talagalay Android 7.1 Nougat
Sawirka Hagaha uma dhigmo nooca ugu dambeeya ee TWRP
Markaad dhamays tirto dhammaan talaabooyinka aan ku sharaxay shuruudaha lagana soo degsaday labada feylood ee lagama maarmaanka ah Waxaan dib ugu bilaabi doonnaa Habka Soo-kabashada oo waxaan raaci doonaa talaabooyinkan:
Tirtir, waxaan xulanaa Cabbirta saafiga ah y Waxaan calaamadeyneynaa dhammaan xulashooyinka marka laga reebo halka aan ka soo guurnay faylalka zip-ka ee Gapps iyo Rom. Si kale haddii loo dhigo, haddii aan u soo guurineyno xusuusta gudaha ma dooran doonno Wipe-ka ku jira xusuusta gudaha iyo haddii aan u guurineyno kaarka SD-ka ee dibedda ah maahan inaan dooranno waddadan. Waxaan calaamadeyneynaa kuwa kale oo dhan waxaanna dulmaraynaa qeybta hoose si aan u fulino ficilka la codsaday.
Ku rakib y waxaan doorannaa Zip-ka Rom ka dibna dhaqaaji baarka hoose ficilkuna waa la fulinayaa.
Waxaan dib ugu laabaneynaa ilaa aan ka gaarno ikhtiyaarka markale Ku rakib y waxaan doorannaa Zip-ka Gapps-ka ama barnaamijyada asalka ah ee Google ee lagama maarmaanka u ah Google Play Store si ay u shaqeeyaan oo aan u soo dejisanno una rakibno barnaamijyo.
Waxaan mar labaad u dhaqaaqeynaa baarka ficilka iyo markii birqeynta Gapps-ka ay dhammaato, waxaan dooraneynaa xulashada Masax dalvick iyo kayd taas oo ka muuqata bidixda hoose ee midig ee ku xigta Nidaamka Dib-u-dhiska iyo wixii ka sarreeya barka boodhka
Waxaan u jiidaneynaa baarka si aan u sameyno tirtirkaas markii la dhammeeyo waxaan doorannaa ikhtiyaarka ah Reboot Nidaamka hadda.
Dib-u-soo-celinta ugu horreysa, terminalku wuxuu qaadan doonaa waxoogaa ka dheer intii loo baahnaa si uu u bilaabo gebi ahaanbaHa welwelin maxaa yeelay waa wax caadi ah, waxay noqon kartaa taas xitaa ilaa toban daqiiqo maaddaama nidaamka qalliinka hadda la rakibay. Marka gabi ahaanba la daarto, waxaan ku habeyn doonnaa xogteena sida Wifi, emayl loogu talagalay koontadayada Google markii aan dhammeyno waan ka tagnaa annaga oo aan waxba taaban toban illaa shan iyo toban daqiiqo si nidaamka cusub ee hawlgalka loo dhammeeyo.
Taas ka dib waxaan si caadi ah u bilaabi doonnaa, taasi waa, waanu daminnaa gebi ahaanba mar labaadna waanu shidanaynaa, markan dib u bilaabistu aad ayey u dhakhso badan tahay waxaanan awood u yeelan doonnaa inaan soo dejisanno oo aan rakibi karno barnaamijyada aannu jecel nahay ama loo baahan yahay.
Haddii aad ku kaydisay barnaamijyadaada barnaamijyada 'Titanium Backup', tani waxay noqon doontaa daqiiqada lagu rakibo arjiga oo lagu sameeyo dib u soo celinta dhammaan barnaamijyada, in kasta oo aan kugula talinayo inaad soo dejiso oo aad rakibto wax walba oo xoqan si loogu rakibo gebi ahaanba nadiif ah iyo hawlgal ka wanaagsan kan terminalka.
Tan waxaad ku sameyn kartaa Ku raaxayso nooca ugu dambeeya ee Android ee wali shaqeynaya Samsung Galaxy S3 model caalami ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S3 ilaa Android 7.1 nooca GT-I9300
jessika moo dijo
Waad salaaman tahay saaxiib, waxaan ka imid dalka Venezuela, s3 gt i9300 oo wata khadka movistar wuxuu joojiyay ku xirnaanta wifi hal daqiiqo ilaa daqiiqad kale, in kasta oo ay aqoonsan tahay shabakadaha la heli karo, haddana ma xirmayo ... Miyaad u maleyneysaa in tan tan lagu xallin karo? Aad baad ugu mahadsantahay horay
Jawaab jessika moo
Waxaan tijaabinayaa anigoo raacaya casharkaan. Kadib waxaan ka faalloodaa sida ay ku dhacday.
Aad baad ugu mahadsantahay waqtiga aad siisay sameynta boostada.
Saaxiibbada Androidsis waxaan u qabtay casharka si aan Nougat ugu dhejiyo s3 i9300. Si kastaba ha noqotee, markaad bilowdo markii ugu horreysay Meesha ay ku qoran tahay cusbooneysiinta, waxay bilaabmaysaa in la furo daaqad oranaysa "saaxirku qaabeynta wuu joogsadaa" halkaasna wax kale kama dhacaan taleefanka ma rakibo nidaamka mana bilaabayo gabi ahaanba anigu ma ihi awood u leh inuu arko muuqaalka kore ee nuugga. Maxaan sameyn karaa?
CIISE SANTIAGO H. dijo
Nabadgelyo Julio, Ma ku guuleysatay inaad xalliso oo aad rakibto Nogaut? Isla waxbaa igu dhacay, waxaan hayaa keyd si aan ugu celiyo Belly Jean 4.3, laakiin waxaan doonayay inaan ku cusbooneysiiyo nooca ugu dambeeyay, salaan!
Jawaab JESUS ​​SANTIAGO H.
Waan isku dayay waana qumman tahay, mahadsanid.
Sideedaba, sideen hadda uga rujin karaa?
Waxaan raacay tillaabooyinka oo dhan isla wixii igu dhacay aniga oo ah JULIO, markii aan bilaabay waxay i siisay fariin ah “saaxir dhismeedka wuu joogsadaa” halkaasna maysan ka dhicin, waxaan kaliya ku guuleystay inaan arko astaanta cusub ee android bilowga. , sidee sameysay
hadaan cusbooneysiiyo samsung galaxy S3 ilaa 7.1.1 raadiyoow ma waayi? Waan cusbooneysiiyay iyo idaacadda uu taleefankani leeyahay ee aan u baahnayn internet, ma heli karo
Waad salaaman tihiin. Iyo tan ka dib, sidee u rakibi kartaa google play iyo wixii rakibid ah?
Ku jawaab Antonio Jesús Lopez vergara
Wadada Zulia dijo
Salaan kadib, sideen ku ogaadaa in Gt-i9300-kayga uu yahay nooca caalamiga ah?
Sony waxay ka noqotey cusbooneysiinta Nougat Xperia Z5, Z3 + iyo Z4 Tablet
Sida loo abuuro sheekooyinka Instagram, shaqeynta xiddiga Instagram